Inona no ho hita any Aostralia | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita any Aostralia
Mariela Carril | | Aostralia, Inona no ho hita
Iray amin'ireo firenena mahafinaritra indrindra hitsangatsangana dia Aostralia: Izy io dia manana karazan-javaboary isan-karazany, maoderina izy io, miaraka amin'ny olona mahafinaritra, misy hetsika ara-kolontsaina maro, tantara fohy nefa mahaliana ary faran'izay tsy dia mahazatra antsika.
Inona no ho hita any Aostralia? Sarotra ny valiny satria goavana ny faritanin'i Aostralia ary mitaky fotoana sy vola ny fitetezana ny firenena iray manontolo. Na izany aza, afaka miresaka momba izay tokony hitsidika isika nefa tsy manadino ny ambiny. Andao hizaha Aostralia!
Izany dia firenena nosy inona no Zanatany anglisy ary ankehitriny dia ao anatin'ny Commonwealth izy io. Teraka tamin'ny zanatany famaizana izy io Rehefa nipoaka ny fonja tany UK, dia nifangaro tamin'ny mpifindra monina bebe kokoa ireo voaheloka taloha, ka niteraka fiarahamonina tsy mitovy hevitra aminy.
Aostralia dia mizara ho faritra fito: Aostralia Andrefana, Faritany Avaratra, Queensland, Aostralia atsimo, New South Wales, Victoria ary Tasmania. Fantatrao fa fantatrao ireo tanàna toa an'i Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth na Canberra na ireo manintona toa ny Great Barrier Reef, Ayers Rock, Byron Bay na ny Great Ocean Highway.
Andao hijery tanàna vitsivitsy aloha ary avy eo ny sasany amin'ireo toerana manintona tsara indrindra. Andao atomboka amin'ny Sidney, tanàna malaza indrindra. Io no renivohitry ny fanjakan'i New South Wales, izay matetika no vavahady mankany amin'ny firenena. Tanàna iray cosmopolitan, miaraka amin'ny trano fisakafoanana sy tranombakoka ary ao anatin'ny minitra vitsy dia mitondra fiara amoron-dranomasina mahafinaritra, toy ny Beach Bondi malaza, ny tsara indrindra amin'ny surf.
Ity misy lalana iray, ny Lalana Bondi mankany Coogee: manomboka amin'ny Farihy ranomasina Bondi ary mifarana enina kilometatra avy eo mandeha manaraka ny hantsana. Noho izany, raha mandeha amin'ny toetrandro tsara ianao dia hahazo ny sary tsara indrindra. Any Sydney koa azonao atao ny mandray ilay Ferry boribory Quay ary aorian'ny 12 minitra hahatratra ny Zoo Taronga. Raha tsy anao ny zoo dia ny Trano Opera avy any Sidney, tranokala azonao zahana ao ambadiky ny seho manomboka amin'ny 7 maraina.
Traikefa iray izay amporisihiko ny fiakarana ny Tetezana Sidney. Misy fitsidihana maromaro azo atao ary tsara daholo izy rehetra. 124 metatra ny haavon'ny tetezana ary mahafinaritra ny fomba fijery. Azonao atao koa ny mandeha mamaky ny faritra taloha ao amin'ny The Rocks, taonjato faha-XNUMX, na ilay faritra fantatra amin'ny hoe Dreamtime Southern X izay manana lova Aboriginal ary mampiseho ny fifandraisan'ity vahoaka ity amin'ny tany, ny morontsiraka ary ny lakandrano.
Amin'ny faran'ny herinandro The Rocks dia manana tsena lehibe. Raha tianao ny tranombakoka any Sydney dia misy ny Tranombakoka sy tranombakoky ny zavakanto ankehitriny. Ny fomba tsara very very an-tongotra dia ny tanàna ambanivohitra Havoana Surrey miaraka amin'ny fivarotany sy ny barany. Ary miresaka bar, raha tianao ny divay dia mamokatra divay tsara i Aostralia ary avy amin'ity tanàna ity dia misy foana ny mety hiditra amin'ny fitsidihana ny Hunter Valley sy ny famokarana divay 120.
Melbourne Tanànan'ny tanàna fanta-daza indrindra any Aostralia izy io, misy ny Open Australian Tennis Open malaza. Mafana be rehefa fahavaratra ka tsara raha mandeha amin'ny lohataona na fararano. Misy sidina mivantana mankany Melbourne ary antsasak'adiny monja miala ny tanàna ny seranam-piaramanidina. Mahafinaritra ny ao afovoan-tanàna miaraka amin'ireo arabe mifandanja misy fivarotana sy kafetoy ny Flinders Street, Collins Street na Degrave Street. Manana marina Rivotra London ....
Misy tsena, Marka Reina Victoria, ny lehibe indrindra any ivelany amin'ny hemisphere atsimo. Misy koa ny Tsenan'i South Melbourne ary amin'ny faran'ny herinandro dia misy mpamorona eo an-toerana mivory ao amin'ny tsenambarotra Rose St. Artists, tratran'ny sambo.
Any Melbourne koa dia misy ny Zaridaina Botanika Royal, Chinatown, tora-pasika St. Kilda 30 minitra fotsiny amin'ny lamasinina. Miaraka amin'ny seranana tsara tarehy, misy mandeha manaraka ny Ony Yarra ary raha mila natiora bebe kokoa ianao adiny iray, mandeha mianatsimo dia hahatratra ny Saikinosy Mornington. Ny teboka fihaonana dia ny tanànan'i Sorrento, izay ahafahanao manomboka ny Dia an-tapitrisany, lalana lava iray kilaometatra eo an-tampon'ny vatolampy. Mahafinaritra ny fomba fijerin'ny Port Philip Bay.
Eto ihany koa ny orinasa famokarana divay, mihoatra ny 50, izay manampahaizana manokana amin'izany Chardonnay sy Pinot Noir noho izany dia toerana na fanaovana fitsangatsanganana divay na fihinanana sy hanandrana ireo tsiro any an-toerana. Avy eto, safidy farany tena tsara dia ny miditra amin'ny Làlan'ny Ranomasimbe Lehibe, lalana amoron-dranomasina izay inoako fa no tsara indrindra manerantany.
Brisbane dia renivohitr'i Queensland. Mba hankasitrahana ny hatsarany dia mila miakatra any an-tampon'ny ianao Tetezana tantara, 80 metatra ny haavony. Avy eo koa ny tranombakoka, ny kafe, ny manodidina mahavariana, ny tranon'ny lapan'ny tanàna tsara tarehy, ary ny mitaingina ferry. Raha tianao koala dia misy ny Toerana Masina Koala Lone Pine Koala, ary raha te hifindra kely amin'ny morontsiraka ianao dia misy ny tsara tarehy Nosy Moreton, iray amin'ireo nosy fasika lehibe indrindra eto an-tany.
Eto ianao dia afaka mankany amin'ny sambo avy ao amin'ny seranana ao anatin'ny 90 minitra. Misy morontsiraka, vorona, lagoon ary lalan-kely na aiza na aiza, ary manomboka amin'ny Jona ka hatramin'ny Novambra dia hita ny trozona mifindra monina. Amena ireo sambo sambo sy haran-dranomasina izay manome toerana lalindalina scuba diving.
Perth no renivohitr'i Aostralia Andrefana, fanjakana manjombona. Misy morontsiraka lehibe, ny Cottesloe BeachOhatra, Leighton na North Beach. ny Nosy Rottnest 18 kilometatra monja miala ny morontsiraka izy ary manana morontsiraka 63 mahafinaritra, 20 bay ary fitoniana be.
Ary farany, afaka manao a fitsangantsanganana an-dranomasina swan ary tonga tao Fremantle niaraka tamin'ny voaheloka meloka izay tena azo tsapain-tanana tany am-ponja. Amin'ny faran'ny herinandro dia manana tsena tsara tarehy ny tanàna. Mazava ho azy, Perth, toa an'i Sydney, Brisbane na Melbourne koa dia manolotra mahaliana fitsangatsanganana antoandro ...
Ny miresaka amin'ny lahatsoratra tokana momba izay ho hita any Aostralia dia sarotra satria goavana ny firenena ary ny fahalalana ny zava-drehetra dia mitaky fotoana sy vola. Lava ny halavirana, tsy dia tsara ny fitaterana an-tanety, ka mila mandray fiaramanidina ianao ary mahatonga ny teti-bola ho lafo kokoa. Tsy midika akory izany hoe tsy afaka miampita ny firenena amin'ny alàlan'ny tany ianao, saingy tsy mora toy ny mandeha amin'ny lamasinina bala izany.
Misy tanàna hafa mahaliana, Cairns, Adelaide, Hobart, ny Gold Coast miaraka amin'ny fahavaratra mandrakizay ... Izany no mahatonga ahy manohy mipetraka ary mieritreritra tsara momba izay tianay hotsidihina. Ary ny fahalalana, eny, fa raha ny dia voalohany mankany Aostralia dia tsy misy fomba hafa ankoatry ny famelana ny toerana sasany tsy ho ao anaty lisitra.
Ary farany, rehefa mieritreritra ireo fisarihana mahafinaritra izay nanova ity firenena ity ho lasa fizahan-tany aho, dia tsy azoko lazaina ny Haran-dranomasina lehibe, Vato Ayers, Tendrombohitra Manga onja mahafinaritra nosy tasmania izay misy ny fiampitana lakana.
Makà sarintany, mamaritra teti-bola ary manapa-kevitra amin'izay toerana haleha. Tsy azoko antoka fa te hiverina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Oseania » Aostralia » Inona no ho hita any Aostralia